China Abavelisi bePDU baseChina kunye nabaXhasi - iChaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeCopper > PDU
I-PDU eyenziwe e-China inokuthengwa kwi-Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Uhlobo lwaseTshayina 1U 13A 6 Indlela ye-PDU ngoTshintsho
Olu hlobo lwesiTshayina i-1U 13A i-6 yeNdlela ye-PDU enesitshintshi isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo enkqubo yeekhabhathi eyakhiweyo, njengeenkampani, amaziko okufundisa kunye nobunye ubunjineli bemizi-mveliso; yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba luhlangane nemigangatho emininzi. .
I-UK Type 1U 13A 6 Way Way PDU Ngokutshintsha
Olu hlobo lwe-UK 1U 13A 6 Way PDU ngeTshintsho lusetyenziswa kakhulu kumacandelo enkqubo yeekhabhathi ezilungelelanisiweyo, ezinjengeenkampani, amaziko okufundisa kunye nobunye ubunjineli bemizi-mveliso; yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inokwakha okuhle, okwenza ukuba ihlangane nemigangatho emininzi. .
Uhlobo lwesiFrentshi 1U 16A 8 Iindlela zePDU ezinokutshintsha
Olu luhlobo lwaseFrance 1U 16A 8 Iindlela zePDU ngoTshintsho. Sinohlobo lwaseTshayina, uhlobo lwase-UK, uhlobo lwesiFrentshi, uhlobo lwase-USA kunye nohlobo lweJamani lwe-PDU. sibonelela nge-PDU ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-USA Chwetheza i-1U 13A Iindlela ezili-10 ze-PDU ngokuTshintsha kunye ne-1-LED Surge Protector
Le yi-USA Type 1U 13A 10 Iindlela ze-PDU ngoTshintsho kunye ne-1-LED Surge Protector. Sinohlobo lwaseTshayina, uhlobo lwase-UK, uhlobo lwesiFrentshi, uhlobo lwase-USA kunye nohlobo lweJamani lwe-PDU. sibonelela nge-PDU ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha PDU abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I PDU eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.